CUISINE "Gaufre" masira, matsiro
Rehefa mikarakara na mihinana « gaufre » dia tsy mahazatra loatra ilay izy masira.
Handeha hiova kely indray ka hahandro «gaufre » masira isika, ho an’ny anio. Mety be koa izy ity ho an’ireo ray aman-dreny manan-janaka tsy mety mihinana legioma.
Gaufre amin’ny ovy sy lardons
Akora ilaina ( ho an’olona 4)
• Ovy 350g
• Dibera 40g
• Atody 3
• Ronono 75ml
• Fraomazy mafy boribory 1 ( 150g)
• Lardons 450g
Voasana sy diovina ny ovy dia zaraina efatra ary andrahoina. Rehefa masaka dia potserina ary arotsaka miaraka aminy ao ny dibera sy ny ronono. Afangaro tsara. Sarahina ny tamenak’atody sy ny tapotsiny. Kapohina hiakatra ho fotsy tsara ilay tapotsiny fa ilay tamenany kosa atambatra miaraka amin’ilay ovy teo. Afangaro tsara vao arotsaka in-droa ao anatiny ao ilay tapotsin’atody nokapohina. Andrahoina ao anaty masinina fanamboarana gaufre ny paty. Endasika kosa ny “lardons”. Rehefa vita dia asiana lardons eo ambonin’ilay gaufre ary rarahina fraomazy efa voakiky dia ampidirina minitra vitsy ao anaty lafaoro. Rehefa mitsonika ilay fraomazy dia vita izay.
Gaufre amin’ny legioma
• Lafarinina 150g
• Menaka 2 sf
• Atody 4
• Korzety 2
• Persily efa notetehina manify
• (Azo asiana épinard ihany koa)
Afangaro ny lafarinina sy ny tamenak’atody, arotsaka miaraka amin’ireo koa ny ronono. Asiana sira sy dipoavatra ary atambatra amin’ireo ny persily efa voatetika. Afangaro tsara dia avela hipetraka mandritra ny ora roa. Karakaraina ireo legioma rehetra dia kikisana manify. Endasina mandritra ny 5 minitra eo. Atambatra amin’ilay paty nokarakaraina teo ireo legioma. Kapohina indray ny tapotsin’atody mba ho lasa fotsy tsara ary asiana sira iray tsongo. Atambatra in-droa misesy amin’ilay paty teo koa io dia andrahoina amin’ny masinina amin’izay. Azo aroso miaraka amin’ny salady rehefa hihinana azy.